ikhadi Isiqophi GeForce 8600 GT - brainchild umenzi elikhulu izingxenye computer Nvidia. Ngokomlando, ukuthi ngokuqinile kulo lonke ekuphileni kukhona esincintisana eyodwa kuphela - AMD (kabani vidiyo ngaphambilini ezikhishwe ATI).
Kulesi sihloko sizohlola leli khadi isiqophi ngokuya ukusebenza, uma kuqhathaniswa mncintiswano kanye nokusebenza kuhlolo nemidlalo.
Ngo-2007 kwaba khona uchungechunge ihluzo amakhadi kusuka Nvidia - GeForce 8600. GT, GTS, GTX - ukuhlela kabusha enjalo lo ikhadi vidiyo.
Ikhadi isiqophi siyindlela isabelomali kanye uphawu ikhadi lwezinhlangano ezingathandwa ezibhekwa - GeForce 8800. Ngo indawo yemincintiswane ne-AMD ngesikhathi Nvidia kudedela ihluzo amakhadi amasha cishe nyanga zonke.
Ngo-2007, kuphela yaqala ukubonakala ihluzo ikhadi lokuqala ukusekela DiretX10. Le nkampani yanquma ukusizakala lesi simo futhi ukukhulula isabelomali sokuqala ikhadi ihluzo shoka le softhiwe. Bafika kahle impela. Ibhodi sidalwe kulabo ababengenamandla okukuthola enamandla kakhulu futhi ithele 8800, kodwa wayefuna ukubona bonke ubuhle ihluzo nge DirectX10 ikhefu kukhompyutha yakho behola imali encane. Nokho, inani eliphansi akayitholi ezifana yokuthengisa okusezingeni eliphezulu. Ngakho lokho babamba kuvidiyo chip? Qhubekisa ngokuthwebula ukuhlola ukusebenza.
GeForce 8600 GT: Ukucaciswa
Yonke uchungechunge 8600 kusekelwe G84 ihluzo processor, okuyinto clocked at 540 MHz. ikhadi Isiqophi ithengiswe amabili osayizi inkumbulo: 256 MB futhi 512 MB. Zombili izinguqulo zisekelwe DDR3 ubuchwepheshe. Ibhodi usebenza imvamisa ka 1400 MHz isinqumo esiphezulu 2560 by 1600 Amaphikseli. Thanda phezulu ekupheleni ihluzo amakhadi kusuka Nvidia, isekela SLI imodi kuze kube amakhadi amathathu ngesikhathi esisodwa.
Ukuze uxhume yensimbi idinga PCI Express x16 slot futhi okungenani 512 MB RAM kukhompyutha ebhodini. Futhi ngenxa ukusetshenziswa kwamadivaysi wonke amathuba anikezwa umsebenzisi kufanele aqiniseke ukufaka uhlelo lokusebenza le-Windows Vista. Lokhu kwakwenziwa ngoba DirectX10 Ukusekela kwakukukhulu labasesivumelwaneni lesisha kuphela-operating system yakwa-Microsoft. Labo ungathandi "Vista", ungahlala ngokuphepha XP namathuba DirectX9 kuphela. Edingekayo ugesi - hhayi ntekenteke 350 Watts. Of interface nezixhumi GeFore 8600 GT inikeza enethiwekhi DVI ezimbili futhi okukhipha kamabonakude (i-TV Out).
Iphakethe kuhlanganisa kwenguqulo evamile ye ikhadi isiqophi: ikhadi uqobo, adapters DVI-VGA, CD-ROM nge imibhalo, abashayeli, iziqondiso, kanye nezinye isofthiwe eyengeziwe, iwaranti. Ngesikhathi ikhadi kubiza 130 160 zamadola, okwenza bakwazi ukuba sikuzuze ngaphandle kwezinkinga, ngisho abanikazi ababuthakathaka noma naphakathi ukucupha lwamakhompyutha.
Ngaphandle efana ikhadi ihluzo akuyona enamandla futhi ithele. Ngokuvamile akhokhe uhlelo encane Ukupholisa ngesimo kuthe ukuphola - emhlabeni umthelela isabelomali onobuhle. Cabangela imiphumela ukuhlolwa ikhadi ihluzo.
GeForce 8600 GT e ayikasekeli kunengqondo ukuba avivinye izinhlelo yesimanje, nemidlalo yama-computer. Ngakho-ke, ingabe kufanele ngithathe izinhlelo ukuhlolwa kanye imidlalo ngo-2007 (ngonyaka ka ikhadi isiqophi).
Ukuhlola kwenziwe ngaso ukuma ezilandelayo: Core 2 Duo 3 GHz, 2 GB we-RAM Windows Vista disk hard of 320 GB. 3D Mark-2006 ubonisa ukuthi version ne-512 MB futhi 256 MB VRAM cishe izakhamuzi zaseBosnia zifana ngokuya ukusebenza.
Manje phenya imidlalo ezimbili bathathwa isivivinyo: Bioshock futhi Medal of Honour Airborne. Bobabili amaphrojekthi yafika nje ngo-2007. I GeForce 8600 GT azizwa unethemba kuphela izilungiselelo ophansi. Ngezinye FPS okusezingeni eliphezulu futhi ultra kungaba ukucwila kuya ku-20 ngesekhondi, okuyinto cishe iyadlaleka. Kuyaphawuleka ukuthi le midlalo emibili elungiselelwe kahle. Lokhu kusho ukuthi ikhadi kungaba ukuzibonakalisa sibi kakhulu imidlalo okuncane. Ngamafuphi - ekilasini isabelomali.
Yiqiniso, ukuthola leli khadi isiqophi ngo-2007, wonke babelazi iqiniso lokuthi lokhu nje kuyinto belingisa ukwesekwa DirectX10. Ukuze ukuzitika ngokugcwele ngento yensimbi kwakudingekile ukuthola uchungechunge 8800. Nokho, labo abangababiziweyo Imidlalo yesimanje kwakunguNk kunjalo, leli khadi safika ngesikhathi.
Zalman Z9 Plus - okusha imodeli Ezezindlu: izici, ukubuyekeza kanye impendulo
I-World Health Izinsuku. Imisebenzi ngoba World Health Day